‘सबै पुरस्कार दोषरहित हुँदैनन्’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘सबै पुरस्कार दोषरहित हुँदैनन्’
भाद्र १६, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — पाल्पा, गोठादी मूलघर भएकी नीलम कार्की ‘निहारिका’ केही वर्षयता अमेरिकावासी बनेकी छन् । ‘मौन जीवन’ (२०५१) उपन्यासबाट साहित्यिक चिनारी बढाउन थालेकी नीलमका कथा, कविता, उपन्यास गरेर एक दर्जन प्रकाशित कृति छन् । उनको गत वर्ष प्रकाशित ‘चीरहरण’ र यो वर्षको ‘योगमाया’ उपन्यास विषयवस्तुको ऐतिहासिकता, नयाँपन र खोजका कारण पनि निकै चर्चामा छन् ।
अझ यस पटक ‘योगमाया’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार पाएपछि नीलमको साहित्यिक नाम–काम चुलिएको छ । आफूलाई ‘पूर्णकालिक लेखक’ भनेर चिनाउन चाहने र हाल अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना बसोबास गरिरहेकी नीलमसँग गरिएको छोटो साहित्यिक संवाद :
‘चीरहरण’ र ‘योगमाया’ लेखन गर्दा बढी अध्ययन–अनुसन्धान केमा गर्नुपर्‍यो ? आफूलाई कुन बढी ऐतिहासिक र आधारसम्मत लाग्यो ?
‘योगमाया’ लेख्नुपूर्व छरिएर रहेका आधारभूत सामग्रीहरू, लेखरचना भेला पारें । तत्पश्चात् स्थलगत अध्ययनका लागि योगमायाको जन्मस्थल भोजपुर पुगेर विभिन्न सरोकार सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग भेट/अन्तर्वार्ता गरें ।
‘चीरहरण’ भने मुख्यतया सेकेन्डरी (द्वितीय) स्रोतमा आधारित हो । घरमै बसेर अध्ययन गरें र वर्तमान बाँचेको समाजसँग तादात्म्यता गरी हेरें । ‘योगमाया’ नेपालको एक इतिहास हो । उत्खनन गरेर नेपालकै माटो र परिवेशमा मैले त्यसलाई पुनर्लेखन गरें । ‘चीरहरण’ का निम्ति भने महाभारतका ठेली साथै अन्य सन्दर्भ पुस्तकहरू पढें । अध्ययन त दुईमै गर्नुपर्‍यो तर ती दुई पृथक् थिए । ऐतिहासिक हिसाबमा म ‘योगमाया’ लाई बढी लिन्छु ।
अधिकांश लेखकहरू आफ्नो लेखनको मूल्यांकन र पुरस्कारको छनोटमा निष्पक्षता छैन/रहन्न भन्छन् । तपाईं प्रवासमा रहेर र लगातार मूल्यांकनमा परेर पनि गुनासो लिएरै बस्नुभएको छ ?
लेखनको मूल्यांकन गर्ने सर्वप्रथम पाठकले हो । कहिलेकाहीं पाठकहरू अलि हल्लाले प्रभावित हुने भए पनि त्यो टिक्ने कुरा होइन । एकदुई पटक झुक्किएर पुस्तक पसलसम्म पुग्नेका निम्ति मात्रै त्यस्तो हल्लाखोर कामको अर्थ रहन्छ । होइन भने पाठक त निरपेक्ष हुन्छन् नै । रहयो, पुरस्कारको कुरा । आफूले प्राप्त नगर्दासम्म त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने अनि, प्राप्तिपछि ‘निर्णय उत्तम थियो’ भनिनु हुँदैन । स्थापित पुरस्कारहरू तमाम् छन् । सबै दोषरहित या प्रभावरहित छन् भन्न सक्दिनँ । तर, यसो भन्दैमा सबैलाई प्रश्न उठाउन पनि सक्दिनँ । म आफैं मोती पुरस्कार नपाउनेमा पर्छु । तर, मैले कहिल्यै गुनासो गरिनँ । निर्णयको आफ्नै सीमा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले कतिपय पाठक र समीक्षकको तपाईंमाथिको मूल्यांकन कृति, लेखन वा शैलीभन्दा पनि ६३ वर्षको इतिहासमा ‘मदन पुरस्कार पाउने चौथी नारी लेखक’ का रूपमा भइरहेको छ । यो लैंगिक मूल्यांकनको अर्थ कत्तिको छ ?
सिर्जनालाई लैंगिक कित्तामा उभ्याएको त मलाई पटक्कै सहय हुँदैन । सिर्जना सिर्जना हो । त्यसमाथि लैंगिक र भूगोलको आधारमा पुरस्कृत भएको अवस्थामा स्वयम्को हृदयलाई स्वीकार्य पनि हुँदैन । तर, २०१३ सालदेखिको लामो मदन पुरस्कार इतिहासमा बल्ल चार महिला सर्जकले प्राप्त गरे भन्ने हिसाबमा यसरी चर्चा भएको होला ।
‘योगमाया’ पात्रको छनोट किन र कसरी गर्नुभयो ? नेपाली समाजमा इतिहासको गर्तमा हराएका यस्तै अरू पात्रहरू कत्तिको छन् ? तपाईंले अरू पात्रमाथि कुनै सोधखोज थाल्नुभएको छ ?
रेडियो नेपालमा मैले साहित्य संसारमा काम गर्न प्रारम्भ गर्दैदेखि (२०५३–५६) मेरा गुरु दाहाल यज्ञनिधि हुनुहुन्थ्यो । (गत साउन २५ गते उहाँ दिवंगत हुनुभयो ।) मैले गत वर्ष ‘चीरहरण’ कृतिका लागि पद्मश्री पुरस्कार पाएपछि मलाई ‘योगमाया’ लेख्ने गृहकार्य/अभिभारा दिनुभएको थियो, यज्ञनिधिज्यूले । त्यस्तै, अमेरिकामा रहेका भाइ केशव ज्ञवालीले पनि मलाई यसबारे निकै पटक सुझाएका थिए ।
हामीले शासकले लेखाएको स्तुतिलाई अक्सर इतिहास भनेर पढ्दै आएका छौं । त्यहाँ जनताको सही इतिहास पक्कै हुँदैन नै । हो, माटोमा जन्मिएका बलिदानीजनको इतिहास हामीले माटोमै टेकेर लेख्नुपर्छ । अन्यथा सही इतिहास पहिल्याउन धेरै ढिला हुनेछ । तर, योगमायाजस्तै पात्रको सोधीखोजी भइरहे पनि तत्काल लेखनका निम्ति अहिले विषयगत सोच र योजना बनाइसकेकी छैन ।
यस पटक मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट आठमा परेका कृतिको तपाईंको आफ्नो मूल्यांकन कस्तो रह्यो ?
गुठीलाई प्राप्त पुस्तकमध्येबाट आठ छानिएका हुन् । निर्णायकमण्डलले विभिन्न क्राइटेरियामा बसेर निर्णय गर्नुभएको होला । पोहोर फागुनसम्म ‘योगमाया’ लेखनमै व्यस्त थिएँ, अहिले भने विद्यावारिधिका निम्ति प्रारम्भिक अध्ययनमा अलि समय खर्चनुपरेको छ । दु:खसँग भन्नुपर्दा मैले सबै पुस्तक पढिसकेकी छैन ।
माटो र मुटुकै गीत
काठमाडौँ — पत्रकारका रूपमा चिनिएका पारसप्रकाश नेपाल नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा पृथक् र मौलिक शैली बोकी गायकका रूपमा उदाएका छन् । हुन त यसअघि नै उनले राष्ट्रभक्ति र देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको ‘नालापानी कालापानी’ गीत सार्वजनिक गरेका थिए, उनको आवाजबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएको थिएँ ।
हालै अर्को अल्बम ‘धरोहर’ श्रोतासामु आएपछि गायक पारसको लगनशीलता र मिहिनेत फेरि प्रकट भएको छ ।
‘धरोहर’ मा चाहेर वा खोजेर सजिलै नभेटिने मूर्धन्य स्रष्टाहरू राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, गीतकार क्षेत्रप्रताप अधिकारी, कवि दिनेश अधिकारी, फूलमान वल, अमन मास्केजस्ता सर्जकका रचना समेटिएका छन् । पारसका गीतहरूमा गहन शब्दको प्रयोग छ । यिनलाई सुन्नेबित्तिकै जोकोहीले पनि यसका शब्दमा भाषामा खेल्ने व्यक्तिको प्रभाव परेको बुझ्न सक्छ । ‘धरोहर’ मा लोकभाका, आधुनिक गीत, स्वदेश र राष्ट्रप्रेमले भरिएका विविध शैलीका गीत छन् । एक–एक शब्दको अर्थ र त्यसको गहिराइलाई आत्मसात्/अनुभूति गरेर पारसले गीत गाएका छन् । फलस्वरूप उनका आवाज र गीतहरूमा यो देश र जनताले भोगेको वेदना, पीडा, सामाजिक विसंगति आदिलाई श्रोताले पनि सजिलै अनुभूति गर्न सक्छन् ।
पारसबारे एउटा जिज्ञासा थाती थियो मसँग— एउटा पत्रकारलाई कसरी संगीत जस्तो प्राविधिक विषयमा पनि यस्तो गहिरो ज्ञान हुन गएको होला ? पछि मात्र मलाई ज्ञात भयो— अध्ययनका सिलसिलामा भारतको वाराणसीमा बिताएका केही वर्षमा उनले शास्त्रीय संगीतको अध्ययन र गायकी तालिम पनि लिएका रहेछन् । आफूले आर्जित गरेका ‘रञ्जयते इति राग:’ भन्ने राग परिभाषालाई उनी ‘धरोहर’ मा प्रयोग गरी गीतलाई सुन्दर र मिठासपूर्ण बनाउन सफल भएका छन् ।
‘धरोहर’ मा संगृहीत गीतहरू वास्तवमा मुटु र माटोसँग जोडिएका छन् । ‘मेरो मन दुख्छ हजुर भाइको मन दुखे’, ‘पल्लो घरको धुरीबाट धूवाँ आ’को छैन’ जस्ता शब्दले भ्रातृप्रेम, राष्ट्रभक्ति तथा एउटा नेपालीले पाएको पीडालाई अर्को नेपालीले अनुभूति गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारणको गाँस–बास–कपासको सपना, खाडी मुलुकसहितमा नेपाली बन्धुको पीडा र चिन्ता, देशको अस्तव्यस्त र भाँडभैलो अवस्था, देशको सधैंको दुरवस्था, हराउँदै गएको सद्भावदेखि तापक्रम वृद्धिले हिमालमा परेको प्रभावसम्मको संवेदना पारसका गीतमा चित्रित छन् ।
‘धरोहर’ लाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि शब्द र स्वरसँगै जुगल डंगोलजस्ता खारिएका संगीतकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको मेरो ठम्याइ छ । कविताको भाव र गायकको स्तरको परख गरेर सुहाउँदो संगीत एवं वाद्य संयोजन गर्न नसके त्यसको स्तरीयता कायम हुन सक्दैन । यस परिप्रेक्ष्यमा जुगलले ‘धरोहर’ मा गरेको कार्य अत्यन्तै सराहनीय तथा उत्कृष्ट छ ।
आजकलका धेरै अल्बमका गीतहरूले एकैनास अर्थात् एउटै शैलीलाई पछयाएको देखिन्छ, तर पारसका गीतहरूमा गायकीको विविधता स्पष्ट झल्कन्छ । त्यसको श्रेय गीतकार तथा गायकलाई त छँदै छ, तथापि यसमा संगीतकारको भूमिका अझै प्रबल रहेको मेरो बुझाइ छ । ‘धरोहर’ मा संगीतकारले नेपालीपना अभिव्यक्त हुने लोकशैलीका अतिरिक्त नेपाली मौलिक बाजालाई अत्यन्तै सशक्त र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यस संग्रहमा सबै वाद्यकलाकारको प्रस्तुति सराहनीय छ । विशेषत: सारंगी, मादल र बाँसुरीवादकले अत्यन्तै उत्कृष्ट वादन गरी ‘धरोहर’ को उचाइ बढाइदिएका छन् ।
समग्रमा, पारसको प्रयास र प्रस्तुति सार्थक छ, त्यही भएर यो सफल पनि छ । पारसको आवाजमा कुनै कृत्रिमता छैन, मौलिकता तथा प्राकृतिकपनाले भरिएको आवाज छ । तथापि संगीतमा साधनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने र निरन्तर अभ्यास गरेमा मात्र यो अझै खारिंदै जाने निश्चित छ । पारसले पनि आफ्नो आवाजको मौलिकपना र शैलीलाई जीवित राखी अझै आफूलाई अब्बल दर्जाको श्रेणीमा पुर्‍याउनका लागि थप साधना र अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
–डा. धु्रवेशचन्द्र रेग्मी
'म मेसीको फ्यान'
बिर्सिएको ज्ञान भण्डार
अपडेटः शनिबार, २७ असार, २०७७ । १५ : १० बजे